မီးတိုက်ပွဲ၊ရေတိုက်ပွဲဆင်နွှဲချက်အပေါ်တိုင်းရင်းသားအသံ၏ဆွေးနွေးချက်။ | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
တိုင်းရင်းသားအသံ တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အသံများ	မီးတိုက်ပွဲ၊ရေတိုက်ပွဲဆင်နွှဲချက်အပေါ်တိုင်းရင်းသားအသံ၏ဆွေးနွေးချက်။	March 10, 2009
လွန်ခဲ့သောသောကြာနေ.တွင်မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများဦးဆောင်ပြီးပြည်သူလူထု၏မူလရပိုင်ခွင့်များအပေါ်အခြေ ခံပြီးတိုက်ပွဲနိဒါန်းစခဲ့လေပြီ၊ယင်းကဲ့သို.တောင်းဆိုချက်တိုက်ပွဲကြောင့်အခြားသောမြို.ကြီးများရှိကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့်ပြ ည်သူလူထုများအားလည်းဂရိုက်ယက်ခတ်နေပါသည်၊မြန်မာပြည်သူလူထု၏မူလရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးများအတွက်တောင်းဆိုချက် သည်တရားသောတိုက်ပွဲဖြစ်သဖြင့်စစ်အစိုးရအတွက်ဘီလူးကြီးနဲ.အတူမုန်းတိုင်ပါသောခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်နေသည်ကိုအ သေအချာပင်ဖြစ်သည်၊သို.သော်၊၎င်းတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖော်ဆောင်ရေးအတွက်တိုင်းပြည်အနှ.ံဦးဆောင်မည့်သူများလိုအပ်နေ ပါသည်၊နိုင်ငံရေးမစွက်ဖက်သောပြည်သူလူထု၏တိုက်ပွဲအစစ်အမှန်ဟာ အပြစ်ကင်းစင်ပြီးယဉ်ကျေးသောလူ.အဖွဲ.အစည်း၏ကျင့်ကြံ သောကျင့်ဝတ်နဲ.လည်းကိုက်ညီ၏၊ လူထု၏ခံစားချက်၊နစ်နာချက်နှင့်မကျေနပ်ချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြောပြတဲ့အခါ အင်းအား သုံးပြီးလက်မနှေးဘဲရိုက်နှက်၊ဖမ်းဆီး၊ဖြိုခွဲလေ့ရှိသောစစ်အစိုးရကိုဘယ်သူအရေးယူပေးမလဲ၊ ပြည်သူလူထုကိုဘယ်သူကအာ ကာအကွယ်ပေးမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်များကိုအဖြေပေးဖို.အချိန်တန်ပြီ၊
၁။ ပြည်တွင်းရှိနိုင်ငံရေးအဖွဲ.အစည်းများကကိုယ့်ပါတီကိုယ့်လူမျိုးအတွက်ကိုသာမကြည့်ဘဲနဲ. လူထုတိုက်ပွဲအစစ်အမှန်ဖော် ဆောင်ပေးရေးကို အဆင့်သင့်ပြစ်ပြီးလား?(ဥပမာ၊ စက်တင်ဘာအရေးအခင်းတုန်းကဆို ရွှေဝါရောင်တိုက်ပွဲအရှိန်ကောင်း လာသည့်အခါ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ချို.ကကိုယ်ရှေ့ဆောင်ပြီးဖြစ်လာသလိုလို၊နှင့်ဟိုအလံဒီအလံထောင်ပြီး အောင်ပွဲခံမလိုလိုလု ပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုရှောင်ရှားဖို.ပြင်ဆင်ထားပြီးလား?)၊
၂။အပစ်ရပ်၊အပစ်မရပ်သောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ.အစည်းများကအပြစ်မဲ့ပြည်သူလုထုကို စစ်အစိုးရကဖိနှိပ်လာရင်အထိရော က်ဆုံးအာကာအကွယ်ပေးနိုင်မည့်နည်းလမ်းကိုပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလား?
၄။နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်ရန်အကြံအစည်းမပါဘဲလူထုတိုက်ပွဲအတွက် စနစ်တကျဖြစ်အောင် ဘက်ပေါင်းစုံကနေဘယ်လိုလုပ် မှထိရောက်မည်းနည်း?
၁။ ပြည်တွင်းမငြိမ်းမသက်ကြောင်းကိုသိသာထင်ရှာစွားကမ္ဘာကသိလာခြင်း၊၂။စစ်အစိုးရဖိနှိပ်လာရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ.တွေကလူထုကိုအာကာအကွယ်ပေးလိုက်တာနဲ.သူတို.၏လမ်းပြမြေပုံ ၇ ချက်အပေါ်အခြေခံပြီးပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲကို ပျက်စေနိုင်ခြင်း၊
၃။ရွေးကောက်ပွဲမပျက်နိုင်တာတောင်မှ တိုက်ပွဲ၏ဂယက်ကြောင့် လုထုကနိုင်ငံရေးအသိနိုးကြားလာပြီးစစ်အစိုးရအတွက်ရွေး ကောက်ပွဲနိုင်ဖို.ဖြစ်နိုင်ချေနဲလာခြင်း၊
၄။အကယ်၍ပြည်တွင်းစစ်ပြန်ဖြစ်လာရင်တိုင်းပြည်အတွက်ပြဿနာကြာရှည်နိုင်သော်လည်း စစ်ဖိနပ်အောက်မှာ တစ်သက် လုံးနေမဲ့အစားလွတ်မြောက်ဖို.ခြေလှမ်းအသစ်တစ်ခုလမ်းဖွင့်လာနိုင်ခြင်း၊
ဒီအရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးချင်ရင် အီးမေလ်ပေးပို.နိုင်ပါသည်၊ tineyintharvoice@gmail.com